ओलीको कटाक्ष : हिरिक्क भइसके, मन्त्री बनाइदिनुस् — SuchanaKendra.Com
ओलीको कटाक्ष : हिरिक्क भइसके, मन्त्री बनाइदिनुस्
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीका केही सांसद मन्त्री बन्न कुदेको बताएका छन् । संसदको मंगलबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले उनीहरुलाई मन्त्री बनाए पनि केही फरक नपर्ने बताएका छन् । एमालेका २२ सांसदले फ्लोर क्रस गर्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
उनीहरुतर्फ संकेत गर्दै ओलीले भने, ‘मेरै पार्टीका केही मान्छेहरु पाउँला र खाउँला भनेर यहाँका पछाडि कुदेका छन् प्रधानमन्त्रीज्यू । तिनीहरुलाई मन्त्री दिनुस्, किन बिलम्ब गर्नुभएको ?’
मन्त्री बन्न नपाएर उनीहरु हिरिक्क हिरिक्क गर्न थालेको भन्दै उनले भने, ‘प्लिज ! (उनले हात जोडे) पछाडि त लगाइसक्नुभयो । कुदेका छन् । मन्त्री खान पाउँ भनेका छन् । मन्त्री दिनुस् प्लिज ! मेरो दलमा घाटा भए पनि सहुँला ।’